Dhanbaal: Mudane Ra’iisul-wasaare – hiigsiga Himiladeenna, Hal arrin baa ka dhiman!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka August 23, 2017	0 260 Views
Muqdisho (Himilonews) – Waxa lagu yaqaan xukuumadaha is-baddal doonka ah ee hadda un kasoo kabsanaya nidaamyadii dib u dhaca ku keenay ayaa ah gaabis kaga jira hir-gelinta himilada cusub iyo helid la’aanta halbeeg sugan oo lagu jaado dejinta shuruucyada ay doonayso inay ku meel-mariso ahdaafteeda.
‘When there a will, there a way!’
Mudane Kheyre – Maheli karnaa fursaddaas?
Qore: Zakariya Xasan Maxamed – ah qoraa; suxufi iyo u ol’oleeye iyo geyfane deegaan kaas oo lixdii sano ee lasoo dhaafay socdaallo ku kala bixiyay koofurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waana qoraha buugga Dhaxalka Duur-joogteenna.
Previous: Kenya oo laga mamnuucayo isticmaalka Bacda ‘Plastic Bag’
Next: Qoys gurigooda ku xanaaneeya Duur-joogta ugaarsiga ku dhiban.
Haweeney Maal-qabeen ah oo la ogaaday sabab la-yaab leh oo ay ku dawarsato!
La kulan Ninka ay Gacmihiisa Qoryo noqdeen–Allana u bari!
Muslimad – muddo 30 sano ah – gacanteeda ku qoraysay Kitaabka Qur’anka.